Manchester United oo diyaar u ah inay qandaraaska u kordhiso Antonio Rudiger. | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Manchester United oo diyaar u ah inay qandaraaska u kordhiso Antonio Rudiger.
Manchester United oo diyaar u ah inay qandaraaska u kordhiso Antonio Rudiger.
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay isku diyaarineyso inay dalab qandaraas weyn ah ka gudbiso Antonio Rudiger , iyadoo ay sii socoto wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan mustaqbalka daafaca dhexe ee Chelsea .
28-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisa Stamford Bridge wuxuu dhacayaa dhamaadka bisha June, taasoo la micno ah inuu haatan xor u yahay inuu wadahadalo la galo kooxo ajnabi ah oo ku saabsan heshiis horudhac ah.
Warbixin dhawaan soo baxday ayaa lagu sheegay in Chelsea ay wadahadalo wanaagsan la yeelatay xiddiga heerka caalami ee dalka Jarmalka Isniintii, iyadoo kooxdu ay ku kalsoon tahay in heshiis la gaari karo mustaqbalka dhow.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Football Insider , Man United ayaa raadineysa inay Rudiger ku tijaabiso Old Trafford iyagoo u soo bandhigaya heshiis weyn oo waqti dheer ah.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Red Devils ay tartan kula jirto kooxaha Tottenham Hotspur , Real Madrid iyo Bayern Munich si ay ula soo saxiixdaan xiddiga reer Jarmal sanadkan.
Rudiger ayaa mar kale u ahaa ciyaaryahan muhiim u ah kooxda Thomas Tuchel intii lagu jiray ololihii 2021-22, isagoo u saftay 27 kulan tartamada oo dhan, isagoo ka qayb qaatay labo gool iyo afar caawin.
Mucaaridka oo dalab culus u gudbiyay xildhibaanada dooran
Muqdisho (Caasimada Online) – Daahir Maxamuud Geelle oo kamid ah musharixiinta sanadkaan u taagan xilka madaxweynimo ee Soomaaliya, sidoo kalena ah Afhayeenka midowga musharraxiinta...
Sawirro: Xasan Sheekh oo Midowga Yurub ka dalbaday in dib loo...
SOMALILAND oo QM u gudbisay dalab ka dhan ah SOMALIA
SIYAAD BARRE HOGAAMIYIHII ‘KU FASHILMAY IN UU BADBAADSHO DALKIISA’